Resin’ny TS Galaxy FC tamin’ny isa 1 noho 0 ny CNaPS Sport androany, nandritra ny lalao mandroso amin’ny fiadiana ny Amboaran’ny CAF 2019, natao tao amin'ny Mbombela Stadium Nelspruit atsy Afrika Atsimo. Baolina tokana maty teo amin’ny minitra fahatelo tamin’ny fidirana voalohan’ny lalao no nitondra fandresena ho an’ny ekipa mpampiantrano. Nisy baolina matin’ny CNaPS Sport saingy nolavin’ny mpitsara. Eny amin'ny Kianjan'ny Cnaps eny Vontovorona ny lalao miverina amin'ny 27 septambra 2019 .
dimanche, 15 septembre 2019 16:51
Kitra - Champions League : Fosa Juniors 0 # 0 TP Mazembe
Nirava ady sahala samy tsy nitoko ny Fosa Juniors (Madagasikara) sy Tout Puissant Mazembe (Repoblika Demokratikan’i Congo) nandritra ny lalao natao teo amin’ny Kianja Rabemananjara – Mahajanga io tolakandro io. Hatao any Lubumbashi RDC afaka tapabolana ny lalao miverina eo amin’ny roa tonta, tafiditra amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika amin’ireo ekipa tompondaka.
dimanche, 15 septembre 2019 14:16
Kitra - Champions League: Fosa Juniors # TP Mazembe
Tontosaina anio tolakandro ao amin’ny Kianja Rabemananjara Mahajanga ny fihaonana eo amin’ny Fosa Juniors (Madagasikara) sy Tout Puissant Mazembe (Repoblika Demokratikan’i Congo), tafiditra amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika amin’ireo ekipa tompondaka.
dimanche, 15 septembre 2019 12:57
Kitra - Coupe de la confédération: TS Galaxy # Cnaps Sport
Tanterahina anio tolakandro ao amin’ny kianja Mbombela Stadium atsy Afrika Atsimo ny lalao mandroso ihaonan’ny TS Galaxy (Afrika Atsimo) sy ny Cnaps Sport (Madagasikara), tafiditra amin’ny fiadiana ny Amboaran’ny CAF).
Tafatsangana omaly ny biraon'ny Vaomieran’ny kitra misahana ny tanora « Commission football des jeunes », ka Randrianaina Odon Marius no notendrena ho Sekretera jeneralin’izany Vaomiera izany, eo ambany fiahian'ny Federasiona malagasy ny baolina kitra (FMF). Mivoha malalaka ho an'ny fikambanan'ny tanora manana klioba, na koa ho an'ireo toeram-panofanana ka liana ho amin’ny fampiroboroboana ny kitra malagasy ny Vaomiera. Eo ihany koa ny fijerena izay azo atao ho an'ireo klioba manana ny sokajin-taona latsaky ny 20 taona. Laharam-pahamehan'ny Vaomiera ihany koa ny famerenana ireny fifaninanam-pirenena eo amin’ny sokajy zandriny ireny. Na dia eo aza izany fanamby rehetra izany dia tsy afa-miala amin’ny fiaraha-miasa amin’ny FMF ny Vaomiera. Efa-taona ny faharetan’ny fe-potoam-piasan'ity Vaomiera ity.
Na efa nanome tsodrano ireo mpilalao hiazo an'i Afrika Atsimo aza dia niverina tamin'ny fanapahan-keviny ka namoaka fanambarana ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra (FMF), fa tsy afaka ny hiazo an'i Johannesburg Afrika Atsimo hiatrika lalao ara-pirahalahiana araka ny fanasan'ny Bafana Bafana ny ekipam-pirenena Malagasy Barea CHAN, noho ny zava-mitranga ao Afrika Atsimo tsy ahazoana antoka ny fandriampahalemana sy ny fiarovana ny mpilalao sy ireo mpanohana. Hijanona hanoman-tena eto Madagasikara ny Barea CHAN hoy hatrany ny fanambarana.
Hiazo an’i Afrika Atsimo, hiatrika lalao ara-pirahalahiana amin’ny Bafana Bafana afrikana tatsimo ny ekipam-pirenena malagasy Barea CHAN. Hotanterahina ao Johannesbourg amin’ny 7 septambra 2019 ny lalao. Nitso-drano ny Barea CHAN ny filohan'ny Federasiona malagasy ny baolina kitra, Rabekoto Arizaka Raoul, androany.
Hanomboka rahampitso alakamisy 5 septambra 2019 ao amin’ny Lapan’ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina, ary hitohy hatramin’ny 15 septambra 2019 ny fiadiana ny tompondaka nasionaly amin’ny taranja basikety, sokajy lahy sy vavy. Nisy androany ny fivoriana teknika ho fiatrehana izany.